July 12, 2019 - ThutaSone
ဦးဇင်းတစ်ပါးရဲ့နှစ် ၂၀၀ သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြ….
ဦးဇင်းတစ်ပါးရဲ့နှစ် ၂၀၀ သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြ…. ဒီတစ်ခါ ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ ကြားသိလိုက်ရတဲ့သူတွေကို အထူးအဆန်းဖြစ်သွားစေမယ့် အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပညာရှင်တွေဟာ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံထဲမှာ နှစ်၂၀၀ သက်တစ်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဦးဇင်းတစ်ပါးရဲ့ ရုပ်ကလာပ်တစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနပညာရှင်တွေကတော့ အခုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ဦးဇင်းဟာ the guru […]
ပြိုင်ပွဲအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန် မကြာမီ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ရတော့မယ့် အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ ကာကွယ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်အချစ်တော် အောင်လအန်ဆန်းကတော့ ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါပြီ။ ပြိုင်ဘက်ဖိုက်တာ ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံဗီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အောင်လအန်ဆန်းကတော့ ခင်မင်ရင်းနှီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ဗီရာရဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဗီရာကတော့ အသက် ၄၁နှစ် အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး အရပ် ၆ပေ ၃လက်မရှိကာ […]
၂၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ မျက်ကပ်မှန် မချွတ်ပဲ ရေချိုးမိတဲ့အမျိုးသား မျက်စိကွယ် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ မျက်ကပ်မှန်ကို မချွတ်ပဲ အကြိမ်ကြိမ် ရေချိုးမိခဲ့တာကြောင့် မျက်လုံးတစ်ဖက် ရောဂါပိုးဝင်ပြီး မျက်စိကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ‘နစ်ခ် ဟမ်ပရီးစ်’ ဟာ သူ့အသက် ၄ နှစ်အရွယ်ထဲက […]
ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်ကို ထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့ စိုးပြည့်သဇင် နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ မင်းသမီးချောလေး စိုးပြည့်သဇင် ဟာဆိုရင် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ အပိုအလိုမရှိတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကွက်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေထံကို အကောင်းဆုံး ချပြပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုများစွာကို ရရှိထားခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ လတ်တလောမှာလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး ချစ်ရတဲ့မိသားစုတွေကိုလည်း […]
ဝိညာဉ်မဲ့မြတ်ဆရာဂုဏ်ပြုပွဲ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) တွင်ကျင်းပ ဝိညာဉ်မဲ့မြတ်ဆရာများ ခေါ် ဆေးကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လက်တွေ့လေ့လာသင်ကြားနိုင်ရန် လှူဒါန်းထားခဲ့သည့် ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်အလောင်းများအား ဂုဏ်ပြုခြင်းအခမ်းအနားကို ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်လမ်းရှိ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ၊ ခန္ဓာဗေဒ (Anatomy) ဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။ အခမ်းအနားသို့ […]
အချိုမှုန့် အစားထိုး ဟင်းခတ်မှုန့်အဖြစ်မြန်မာ့ထန်းရည်ကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချတော့မည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထန်းရည်မှချက်လုပ်ရရှိသည့် အနှစ်အား အချိုမှုန့် အစားထိုးဟင်းခတ်ပစ္စည်းအဖြစ် ထုတ်လုပ်ရောင်းချရန်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ထန်းချစ်သူများအသင်း က သိရသည်။ထိုသို့ ဟင်းခတ်မှုန့် ထုတ်ရာတွင် ထန့်လျှက်နံ့ မထွက်စေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်၍ ဖြန့်မည်ဖြစ်ကာ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (FDA) ၏ ထောက်ခံချက်ပါ […]
ဆေးရုံတွေ ချမ်းသာပြီပေါ့ဗျာဒီလိုဆီတွေနဲ့ စားသောက်ကုန် ထုတ်မှတော့ ဒီလိုဆီတွေနဲ့ စားသောက်ကုန် ထုတ်မှတော့ ဆေးရုံတွေထောပြီပေါ့ဗျာ …. ကိုယ်တိုင်တွေ့တော့ အရမ်းအံ့သြသွားတယ် ရိုးရိုးစားအုံးဆီလောက်ပဲ လုပ်ကြတယ်ထင်တာ အခုတော့ဆီက ပလတ်စတစ်နဲ့ပတ်ထားတဲ့ အခဲကြီးဗျာ ကြော်ပြီးစင်တဲ့ ဟာတောင် ပြန်ခဲသွားတယ်။ ဆီအုန်းသီး ရဲ့ အပြင် အမျှင်တွေကို ပေါင်းခံကျိတ်ခွဲလျှင် စားအုန်းဆီ(Crude […]
မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းတွင် မိုးကြီးနေ၊ ဧရာဝတီမြစ်နှင့် မြစ်ကြီးတချို့ စိုးရိမ်ရေမှတ်နား ရောက်ရှိ ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၁၂။ မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသအချို့တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်အပါအဝင် မြစ်ကြီး အချို့သည် စိုးရိမ်ရေမှတ်နားသို့ ရောက်ရှိနေသည်ဟု မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ရေသည် မြစ်ကြီးနား […]
ရန်ကုန််-ဒလတံတား တည်ဆောက်ရန်် ဘုန်းကြီးလမ်းကို ၁၅ လ ကြာ ပိတ်ထားမည်် ရန်ကုန်-်ဒလတံတား စီမံကိန်းကြောင့် ဩဂုတ်ကစ၍ ဘုန်းကြီးလမ်းကို ပိတ်မည်ဖြစ်၍ ယာဉ်များ လမ်းကြောင်းရှောင်လွှဲ ပြေးဆွဲရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း ဝိုင်ဘီအက်စ် ယာဉ်လိုင်းတာဝန် ရှိသူများက ပြောသည်။ ဘုန်းကြီးလမ်းကို ဩဂုတ် ၁ ရက်မှ ၂၀၂၀ […]